Costa Rica dia manitatra ny lisitr'ireo firenena mahazo mitsidika
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Costa Rica » Costa Rica dia manitatra ny lisitr'ireo firenena mahazo mitsidika
Tamin'ny 1 Aogositra 2020 Costa Rica no nanokatra ny seranam-piaramanidina iraisam-pireneny: Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Juan Santamaría, Seranam-piaramanidina Daniel Oduber Quirós, ary seranam-piaramanidina Tobías Bolaños.
Ny lisitry ny firenena avela hiditra dia dinihina matetika ary mifototra amin'ny fanavaozana farany dia natatra toy izao manaraka izao ny lisitra:
• Vondrona Eraopeanina
• Fanjakana Mitambatra
• Korea Atsimo
• Novely zelandy
Manomboka amin'ny 1 septambra izao dia afaka mitsidika an'i Costa Rica ireo mponina amin'ny fanjakana enina any Etazonia.
Misokatra ho an'ny mpizahatany izao ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Costa Rica:
Iberia ary Lufthansa efa manidina ao.
Air Madagascar manohy ny sidina ny 12 septambra.
Air France manohy ny sidina ny 14 Oktobra.
• Ny mpizahatany dia tsy maintsy mamita sy manolotra fanadihadiana momba ny valanaretina.
• Ny mpizahatany dia tsy maintsy mampiseho porofo amin'ny fitsapana PCR coronavirus ratsy. Ny valiny dia tsy maintsy noraisina tao anatin'ny 48 ora alohan'ny diany nankany Costa Rica.
• Ny mpizahatany dia tsy maintsy mahazo fiantohana fitsangantsanganana izay manarona fikarakarana ara-pahasalamana na fijanonana trano fandraisam-bahiny tsy nampoizina. Ireo mpizaha tany dia tsy maintsy manaraka ny fomba fanao amin'ny seranam-piaramanidina sy ny fahasalamana eo an-toerana. Anisan'izany ny fanaovana sarontava na saron-tava amin'ny toe-javatra rehetra ao an-trano
• Ireo mpizahatany avy any Etazonia dia tsy maintsy mampiseho porofon'ny maha-izy azy ireo hipetraka ao amin'ny iray amin'ireo fanjakana enina nahazo alalana tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlan'ny mpamily.
Horohoron-tany mihoatry ny renivohitra Costa Rica
Ny doro tanety any California dia misy fiantraikany amin'ny toerana fizahan-tany manomboka any Big Sur ka hatrany Santa Cruz ka hatrany amin'ny distrikan'i Napa sy Sonoma